Vashandisi veBMW vari kusangana nematambudziko neBluetooth yeiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Vashandisi veBMW vari kusangana ne iPhone 7 mabluetooth nyaya
Iyo yazvino iPhone modhi yasvika pamusika, iyo iPhone 7, pamusoro pekutambura nematambudziko akati wandei mukushanda kwayo kwatinogara tichitaurira, urikusanganawo nematambudziko nekubatana kweBluetooth. Mazuva mashoma apfuura takakuzivisa nezvematambudziko emawatchwatches anotungamirirwa neApple Wear kuti akwanise kubatanidza neiyo iPhone 7, matambudziko ayo Google akaziva kuti aripo nepo Apple isati yataura, kunyangwe sekureva kwevakomana vepaMountain View ivo vari kushanda panzira yekubatana mukuyedza kuigadzirisa. Asi zvinoita sekunge harisi iro rega dambudziko rine chekuita neBluetooth yeiyo iPhone 7, kubvira payakatangwa, vashandisi vazhinji vanoti vane matambudziko pavanobatanidza yavo nyowani iPhone mumotokari dzeBMW.
Vazhinji ndivo vashandisi vanozviti vane matambudziko ekushanda neiyo iPhone 7 uye yakasanganiswa bluetooth yemotokari, zvisinei nemhando yacho, asi Zvinotaridza kuti hachisi chega chiratidzo, kubvira vashandisi veKia neHyundai vanoti mune mamwe mamodheru kubatana kuri kupawo matambudziko. Matambudziko anotangira pakucheka kwenzwi patinotanga kana kugashira kufona kana mimhanzi ichitanga, kutamba kunomira pakati pemasekonzi mashanu negumi Vashandisi vanomanikidzwa kudzoreredza chishandiso asi dambudziko rinotangazve.
BMW yakabvuma dambudziko iri uye inoti iri kushanda neApple kuyedza kutsvaga mhinduro kuchinetso ichi.
Iye zvino iPhone 7 haisi chishandiso chinotenderwa neBMW senge inoenderana nemotokari dzekambani yeGerman kudzamara tapedza bvunzo dzese dzatiri kuita. Parizvino hatina chero zuva rakatarwa mukarenda yekupa kuenderana kweiyi terminal nemotokari dzedu.
BMW inokurudzira vashandisi kumirira vakomana vanobva kuCupertino regedza gadziriso kune iOS 10 kugadzirisa iyi nyaya Pamusoro pekushanyira webhu www.bmw.com/update kuti uzive nezve izvi nemamwe matambudziko ane chekuita nemotokari yako. Sezviri pachena Apple yakaudza vagadziri vanoverengeka kuti matambudziko aya achagadziriswa mune inotevera gadziriso. BMW, pachikamu chayo, inokurudzira kuvandudza iyo ConnectedDrive system kune yazvino vhezheni senzira yekugadzirisa dambudziko, nekuti zvinoenderana nekambani dambudziko harisi ravo chairo, asi Apple. Iwo chete mamodheru eBMW ayo parizvino asingatambure nedambudziko iri ndeaya akashongedzerwa neCarPlay.
Mugore re 2014, Apple yatove nematambudziko neBluetooth yemamwe mota izvo zvakamanikidza Cupertino kuburitsa inogadziridza kune iOS 8 yeiyo iPhone 6 uye iPhone 6 Plus. Gare gare iyo iPhone SE yakatambura iwo mamwe matambudziko, matambudziko akagadziriswa pamwe nekugadziridzwa kweiyo iOS 9.3.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Vashandisi veBMW vari kusangana ne iPhone 7 mabluetooth nyaya
NdiPeugeot (yangu modhi ndiyo 308 kubva muna 2008) ndine dambudziko rakafanana, asi ndinofunga hazvisi nekuda kweiyo iPhone 7, asi nekuda kweiyo iOS 10, kubvira pandakave ne6S uye beta yeIOS 10 yatove akandipa matambudziko ... asi ini ndaifunga kuti yaive nekuda kweBeta ... ini handioni.
Dambudziko nderekuti mota yeBluetooth inodimbura kairi kaviri ... pamwe painotanga iyo vaviri vaviri, asi mushure mechinguva kubatana nemota kunonyangarika ... Kashoma. Ndinovimba kuzvigadzirisa munguva pfupi iri kutevera
Ndine 6S ine iOS 10 kubva kune yekutanga beta, uye BMW 3 Series, haina kundipa chero matambudziko uye ndinoshandisa bluetooth zvakanyanya mumota. Inofanira kunge iri imwe yeaya fucking bugs kuti uwane.
Ini ndichaiyedza pane yangu BMW kubva munaGunyana 2015.
Tichazviona here muiyo iPhone 8?: Apple patents iyo chigunwe chigunwe chinoshanda kuburikidza nechiratidziri
Vakaisa pakutengesa kenduru nekunhuwa kweMac nyowani